အရိပ်ဇာတ်သိမ်းပိုင်းလေးကို ကြိုက်ရဲ့  လားလို့မေးလိုက်တဲ့ မေမြင့်မိုရ်
အရိပ်ဇာတ်သိမ်းပိုင်းလေးကို ကြိုက်ရဲ့ လားလို့မေးလိုက်တဲ့ မေမြင့်မိုရ်
13 Jun 2018 . 2:11 PM
အရိပ်ဇာတ်ကားရဲ့  အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ မေမြင့်မိုရ်က ဇာတ်သိမ်းသွားပြီ ဖြစ်တဲ့ အရိပ်ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်လို့ ပရိသတ်ကိုမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးရင်း အခုလိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
“စု ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးရေ ‘အရိပ်’ ရဲ့ Happy Ending လေးကိုကြိုက်ရဲ့လား ချစ်ပရိသတ်ကြီးဖြစ်စေချင်တာနဲ့တစ်ထပ်တည်းကြရဲ့လား? အရိပ်ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကိုနေ့စဉ်မပြတ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ ချစ်ပရိသတ်တစ်ယောက်ချင်းဆီတိုင်းကိုလဲ ‘စုစုလှိုင်’ မှကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် အရမ်းလဲချစ်ပါတယ်ရှင့်”
‘စု’ ရဲ့နောက်ထပ်လာမဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေဇာတ်ကောင်အသစ်လေးတွေကိုလဲ ‘စု’ လိုပဲချစ်ပြီးအားပေးကြပါဦးလို့
“အားလုံးကိုချစ်တဲ့ ‘စုစုလှိုင်’-‘စု’-‘မမစု” ဆိုပြီးတော့ အရိပ်ဇာတ်ကားထဲကသူမရဲ့  နာမည်ဖြစ်တဲ့ စု ဆိုတဲ့ နာမည်လေးနဲ့ အခုလိုနှုတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်”။
အရိပ် Producer ဒေါ်ခင်ခင်လေးနဲ့အတူတွေ့ရတဲ့ အဖွဲ့သားများ
အရိပ်ဇာတ်လမ်းတွဲဟာ ပရိသတ်တွေကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ အတွက်အောင်မြင်မှုရရှိလိုက်တဲ့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အရိပ်အဖွဲ့သားတွေကိုလည်း ဇာတ်သိမ်းပိုင်းမတိုင်ခင်တစ်ရက်က ဂုဏ်ပြုပွဲကျင်းပပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရိပ်ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကိုတော့ ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့ညမှာ ပြသခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credit: May Myint Mo Facebook
အရိပျဇာတျသိမျးပိုငျးလေးကို ကွိုကျရဲ့ လားလို့မေးလိုကျတဲ့ မမွေငျ့မိုရျ
အရိပျဇာတျကားရဲ့ အဓိကဇာတျကောငျဖွဈတဲ့ မမွေငျ့မိုရျက ဇာတျသိမျးသှားပွီ ဖွဈတဲ့ အရိပျဇာတျကားနဲ့ပတျသကျလို့ ပရိသတျကိုမေးခှနျးလေးတဈခုမေးရငျး အခုလိုကြေးဇူးတငျစကားဆိုလိုကျတာဖွဈပါတယျ။
“စု ကိုခဈြတဲ့ပရိသတျကွီးရေ ‘အရိပျ’ ရဲ့ Happy Ending လေးကိုကွိုကျရဲ့လား ခဈြပရိသတျကွီးဖွဈစခေငျြတာနဲ့တဈထပျတညျးကွရဲ့လား? အရိပျဇာတျလမျးတှဲလေးကိုနစေ့ဉျမပွတျကွညျ့ရှုအားပေးတဲ့ ခဈြပရိသတျတဈယောကျခငျြးဆီတိုငျးကိုလဲ ‘စုစုလှိုငျ’ မှကြေးဇူးမြားကွီးတငျပါတယျ အရမျးလဲခဈြပါတယျရှငျ့”
‘စု’ ရဲ့နောကျထပျလာမဲ့ဇာတျလမျးတှဲတှဇောတျကောငျအသဈလေးတှကေိုလဲ ‘စု’ လိုပဲခဈြပွီးအားပေးကွပါဦးလို့
“အားလုံးကိုခဈြတဲ့ ‘စုစုလှိုငျ’-‘စု’-‘မမစု” ဆိုပွီးတော့ အရိပျဇာတျကားထဲကသူမရဲ့ နာမညျဖွဈတဲ့ စု ဆိုတဲ့ နာမညျလေးနဲ့ အခုလိုနှုတျဆကျထားတာတှရေ့ပါတယျ”။
အရိပျ Producer ဒျေါခငျခငျလေးနဲ့အတူတှရေ့တဲ့ အဖှဲ့သားမြား
အရိပျဇာတျလမျးတှဲဟာ ပရိသတျတှကွေိုကျနှဈသကျကွတဲ့ အတှကျအောငျမွငျမှုရရှိလိုကျတဲ့ ရုပျသံဇာတျလမျးတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့အရိပျအဖှဲ့သားတှကေိုလညျး ဇာတျသိမျးပိုငျးမတိုငျခငျတဈရကျက ဂုဏျပွုပှဲကငျြးပပေးခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။အရိပျဇာတျသိမျးပိုငျးကိုတော့ ဇှနျလ ၁၂ ရကျနညေ့မှာ ပွသခဲ့တာဖွဈပါတယျ။